युएइको नेपाली राजदूतावासमा पासपोर्टलाई आवेदन दिँदा थाहा पाउनु पर्ने प्रक्रिया र जानकारी | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
१) MRP राहदानीको लागि के के कागजात पेश गर्नुपर्दछ ?
क) सबै विवरण भरेको फारम दुई प्रति
घ) तोकिएको ढांचाको फोटो चार प्रति
२) MRP राहदानीको लागि कति शुल्क लाग्दछ?
३२० धिराम लाग्दछ
तर राहदानी हराएको, नासिएको वा राहदानीमा क्षति पुर्‌याएको अवस्थामा ६४० धिराम लाग्दछ
३) MRP राहदानी कसले जारी गर्दछ ?
MRP राहदानी काठमाण्डौ नारायणहिटीस्थित राहदानी विभागले प्रदान गर्दछ।
४) MRP राहादानी बनेर आउन कति समय लाग्दछ?
फाराम बुझाएपछि MRP राहादानी बन्न करिब ३ महिनामा लाग्दछ।
५) राहदानी बनेर आए नआएको कसरी थाहा पाउने?
यो जानकारी तपाईंले दुई किसिमबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ
राहदानी बनेर आएका व्यक्तिहरुको नामावली दूतावासको वेवसाईट http://www.nepalembassyuae.org/en/media-centre1/mrp-list मा राखिएको हुन्छ। वेवसाइटको मुखपृष्ठमा रहेको सूचना हेरेर वा हेर्न लगाएर आफ्नो नाम रहेको लट नम्बर र सिरियल नम्बर टिपेर आउनुपर्दछ।दूतावासको सूचना पाटीमा समेत राहदानी बनेर आएका व्यक्तिहरुको नामावली टाँस गरिएको हुन्छ।६) MRP राहदानीको दरखास्त फाराम बुझाउन र MRP राहदानी लिन निवेदक स्वयं दूतावासमा उपस्थित हुनु पर्दछ ?
हो, राहदानीको दरखास्त फाराम बुझाउन तथा राहदानी लिन निवेदक स्वयं दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्दछ ।
७) MRP राहादानी लिन आउँदा के के कागजात लिएर आउनु पर्दछ ?
MRP लिन आउँदा पैसा बुझाएको रसिद, पुरानो राहदानी र सक्कल नागरिकता लिई आवेदक आफैँ आउनु पर्दछ । यदि अस्थायी राहदानी लिएको भए सो समेत लिएर आउनु पर्दछ।
८) दुतावासमा दरखास्त फाराम बुझाएपछि काठमाण्डौबाट पासपोर्ट लिन पाईन्छ कि पाईदैन ?
पाईन्छ, तर यसका लागि दूतावासले लेखेको पत्र लिएर राहदानी विभाग नारायणहिटीमा सम्पर्क गर्न जानु पर्दछ ।
९) MRP राहदानीको लागि दरखास्त फाराम कहाँ पाईन्छ ?
यस दूतावासको वेवसाईट वा www.dopmofa.gov.np/mrp मा गएर Online भरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । प्रिन्ट गर्दा Page Scaling को None Option मा गएर मात्र Print गर्नुपर्दछ । अथवा कुनै फाराम भर्ने सर्भिस सेन्टरमा गएर फाराम भर्नुपर्दछ ।
१०) MRP राहदानी बनेर आएपछि त्यसमा नाम, थर, जन्ममिति, ठेगाना सच्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
MRP बनेपछि त्यसमा कुनै किसिमले कुनै पनि विवरण सच्याउन मिल्दैन । यदि सच्याउनु परेमा नयाँ MRP राहादानी नै बनाउनु पर्दछ।
११) MRP मा बच्चाको फोटो टाँस्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
MRP मा बच्चाको फोटो टाँस्न मिल्दैन । बच्चाको पनि नयाँ MRP राहदानी नै बनाउनु पर्दछ ।
१२) दूतावासमा राहदानी फाराम बुझाउने र वितरण गर्ने समय के हो ?
राहदानी फाराम बुझाउने समय आइतबाररदेखि बिहीवारसम्म बिहान ९:३० बजेदेखि दिउँसो १:३० बजेसम्म हो। फारम बुझाएपछि नै राहदानी लिन कहिले र कुन समयमा आउने भनेर सोध्नुहोस्। अथवा तल दिईएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि राहदानी बुझ्ने समय थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
१३) पासपोर्टसँग सम्बन्धित जानकारीको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने?
सेक्टर डब्लु १५–२, भिल्ला नम्बरः १३/१, प्लट नम्बर ४० अल करामा स्ट्रिट, अल करामा एरिया
फ्याक्स: ००९७१२६३४४४६९ पोस्ट बक्सः ३८२८२,
कार्यालय खुल्ने समय: कन्सुलरको कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:३० बजेदेखि दिउँसो १:३० बजेसम्म (आइतबाररदेखि बिहीवारसम्म)